चीन उद्योग ऊर्जा उद्योग पीसीबी निर्माता र आपूर्तिकर्ता कन्ट्रोलिंग - टेक
घर > उत्पादनहरू > उद्योग नियन्त्रण पीसीबी > उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै
1.Production Introduction of उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै
उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै are mainly used in equipment from the field of industrial automation. In the historical trend of global Industry 4.0 and the औद्योगिक इन्टरनेट,उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै will haveawide range of needs.
The main features of उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै include long life cycle, complex using environment, electromagnetic anti-interference, high-density requirements and high-power heat dissipation requirements, etc., PCB processing technology is diversified, and reliability requirements are high, mostly using medium and high Tg materials, with impedance controlling requirements.
We built the whole production processes of उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै in our own factory, we have VCP (vertical continuous plating) line, vacuum etching line, other advanced production equipment, we also have impedance tester, network analyzer, TMA\_DSS/TGA thermal analysis equipment, etc. to meet the complex and diverse needs of industrial controlling PCB.
Q：What test equipment do you have specially for उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै?
Q：What are your major customers for उद्योग ऊर्जा उद्योग PCB नियन्त्रण गर्दै?
हट ट्याग: उद्योग ऊर्जा उद्योग पीसीबी, चीन, कारखाना, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, OEM नियन्त्रण गर्दै